विशेष ओस र मुसाबाट मतपत्र सुरक्षित छ : आयोग प्रवक्ता ढकाल
Ujyaalo बिहिवार, मंसिर १४, २०७४ १९:१९:००
काठमाडौं, मंसिर १४ – पहिलो चरणमा आइतबार मतदान भएका सबै मतपेटिका जिल्ला सदरमुकामा ल्याइएको छ ।
डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो र थार्का ताङसोङ्कामा मतदान स्थलका मतपेटिका बुधबार हेलिकोप्टरबाट सदरमुकाम ल्याइएपछि पहिलो चरणमा चुनाव भएका ठाउँका मतपेटिका सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकाममा संकलन भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ३२ जिल्लाका २ हजार ९ सय १७ मतदान स्थलका मतपेटिका सम्बन्धित जिल्लाका सदरमुकाममा संकलन गरिएको हो ।
सुगम र सडकको पहुँच पुगेका स्थानका मतपेटिका आइतबार राती र सोमबार नै जिल्ला सदरमुकाम ल्याए पनि विकट र हिमाली क्षेत्रका मतपेटिका संकलनमा ढिलाइ भएको हो । दोस्रो चरणमा मंसिर २१ मा हुने मतदान सकिएपछि मतगणना सुरु हुनेछ ।
त्यतिन्जेलसम्म मतपेटिका र मतपत्रको सुरक्षालाई सुरक्षित राख्नुपर्ने चुनौति निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई छ । मतपत्र र मतपेटिकाको सुरक्षाको प्रबन्धनबारे प्रकाश ढकालले आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
मतपेटिका संकलनपछि अब २१ गतेसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि आयोगले कस्तो व्यवस्थापन गरेको छ ?
मतपेटिकाको भौतिक र मनोवैज्ञानिक सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था अहिले देखिएको छ । त्यसका लागि मतपेटिका राखिएको स्थानमा निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलले सिलबन्दी गरेका छन् । कोठा बाहिर सिसी टिभी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । भौतिक सुरक्षातर्फ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको समन्वयनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाको प्रयोग गरिएको छ ।
चिसो र ओस्यानबाट मतपत्र जोगाउन कस्ता कस्ता कुरामा ध्यान दिनुभएको छ ?
आम नागरिकको सार्वभौमसत्ताको प्रयोगका रुपमा रहेको मतपत्रको सुरक्षा गर्नु आयोगको दायित्व हो । त्यसमा आयोग प्रतिबद्ध छ । जहाँसम्म चिसो र ओस्यानको कुरा आएको छ । हामीले प्रयोग गरेको मतपेटिका प्लाष्टिकका छन् । प्लाष्टिकको मतपेटिका भएकाले सामान्य तथा चिसो र ओस्यानको समस्या आउँदैन । त्यस्तो घटना नहोस् भनेर मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरुले पर्याप्त सावधान अपनाउनुभएको छ । मतपेटिका भण्डारणका लागि सकेसम्म ओस्यान नहुने माथिल्लो तला प्रयोग गरिएको छ । भुईंतलामा राखे पनि ओस्यान नहुने ठाउँमा राखिएको आयोगलाई जानकारी प्राप्त भएको छ ।
ओस्यानका कारण छाप लगाउन प्रयोग गरिएको मसी लतपतिन सक्दैन ?
हामीले प्रयोग गरेको मसी गुणस्तरयुक्त छ । छाप लगाइको ‘फ्राक्सन अफ सेकेण्ड’ मा सुकिसक्छ । राम्रैसँग पानी वा आसेको पहुँचमा पुग्यो भने मात्र लतपतिने समस्या हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्था आउँदैन । ढुक्क हुनुहोस् ।
मुसाबाट जोगाउन नि ?
यी सबै कुराहरु मतपत्रको सुरक्षा गरिनुपर्छ भन्ने सन्र्दभमा आएका हुन् । मुसाबाट पनि मतपत्र जोगाउन पनि त्यस खालको व्यवस्थापन गरिएको छ ।